बाढीपहिरोले ५४ परिवारको चौरमा बास- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन १२, २०७७ वीरेन्द्र केसी, सन्जु पौडेल
अर्घाखाँची, तिलोत्तमा — अर्घाखाँचीको शीतगंगा–१२ कोठिया मैदानको जोख्ले गैरामा जमिन भासिने क्रम आइतबार पनि रोकिएन । शुक्रबार भत्किएका घर पन्छाएर बचेका अन्नपात, लुगाफाटा र अन्य सरसामान निकालेर चौरमा आएको सरस्वती थापाले बताइन् ।
‘सम्पत्तिका नाममा त्यही घर थियो । ढल्यो, अब कहाँ गएर बस्ने ? जग्गा किन्ने र घर बनाउने पैसा छैन,’ उनले भनिन्, ‘कतै चौर र जंगल छेउमा सानो झुपडी भए पनि घर बनाइदिनूस् माननीयज्यू ।’ पहिरो स्थलमा पुगेका राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई आइतबार थापालगायतका पहिरो पीडितले बासको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
शुक्रबार आधा चर्किएका घर पनि आइतबारसम्म भत्किसकेका छन् । कतिबेला कहाँ भासिएर पहिरो जान्छ भन्ने कुनै टुंगो नभएको विस्थापितहरूले बताएका छन् । भत्किएको घर पन्छाएर अन्नपात र लुगा–कपडा भेटिए पनि नगद, गरगहना पुरिएको अर्का पीडित टेकलाल गैरेले गुनासो गरे । ‘म अहिले चौरमा बसेको छु, संघसंस्था र नगरपालिकाले खाने खर्च दिएको छ । तर कहाँ गएर बस्ने, बासको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो,’ सांसदसँग उनले भने । सांसद, दलका नेता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलसमक्ष पीडितहरूले गुनासो गरेका थिए ।
शनिबार खाद्यान्न लिएर पुगेका कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कमलप्रसाद भुसाल, उपसभापति शान्ता भण्डारीलगायतको टोलीसँग ६० वर्षीय ताराबहादुर नेपालीले भने, ‘पाखुरामा बल छँदा दुःख गरेर बनाएको घर हेर्दाहेर्दै गर्ल्यामै ढल्यो, अब म कहाँ बस्ने ? मलाई छाप्रो भए पनि ओत बनाइदिनूस् ।’ बचेका सामान र भैंसी ल्याएर उनी पौवामा बसेका छन् । ‘मेरो र भैंसीको ज्यान बच्यो, घर पहिरोले बगायो, बुढेसकालमा बिचल्लीमा परें,’ उनले भने ।
आइतबारसम्म ५४ परिवार बस्ती छाडेर चौरमा पुगेका छन् । ‘जमिन भासिँदै घर भत्किने क्रम रोकिएन,’ शीतगंगा–१२ का वडाध्यक्ष बाबुराम गैरेले भने, ‘शुक्रबार १७ घर पहिरोले लग्यो, १८ घर चर्किएका थिए ।’ आइतबार थप १९ घर चर्किएपछि चौरमा पुग्ने परिवारको संख्या थपिएको छ । १६ घरमात्रै सुरक्षित छन् । जमिन भासिने क्रम नथामिए विस्थापितको संख्या थपिने स्थिति छ । रजिया मावि, गाउँको खाली चौर र डाँडोमा विस्थापित परिवारलाई राख्न पाल टाँग्न सबै जनशक्ति परिचालित गरिएको वडाध्यक्ष गैरेले बताए ।
बाढीले सडकमा पुर्‍यायो
रूपन्देहीको देवदह–३ टटेरास्थित केबी रानाको घरअगाडि आइतबार खोला बगिरहेको थियो । उनका ५ बंगुर बाढीले बगायो । ‘आफू बाँचियो, त्यही ठूलो मान्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ज्यान रहे सम्पत्ति पछि जोडौला ।’
संगीता थारूले चामल, दाल, नुन सबै पुरिएको सुनाइन् । बाँसको छाप्रोमा खाजा पसल चलाएर गुजारा गरिरहेकी उनले पहिलोपटक बाढी खेपेको बताइन् । कटेरो बाढीले डुबाएपछि परिवारको बिचल्ली भएको उनका श्रीमान् जगीश्वरले गुनासो गरे । देवदह–३ कै समिता थारूको ८ कट्ठा खेतमा बालुवा थुप्रिएको छ । धान खेत पुरिएपछि खान नपाउने डर उनमा छ । स्थानीय झविन्द्र राना मगरको बंगुर फार्ममा पानी पसेपछि १९ वटा बंगुर बगेका छन् । बुटवल–११ देवीनगरका बासिन्दा मगरले १ वर्षअघि ४२ लाख रुपैयाँ लगानी गरी बनाएको फार्ममा रहेको ६ क्विन्टल दाना पनि बाढीमै मिसिएको छ ।
रूपन्देहीका मर्चवारी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका मन्झरिया, लोहाटोला, बडघर टोला, भरवलिया, देवानडिहलगायतका क्षेत्रका १८ भन्दा बढी घरमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १०:११
आश्विन १२, २०७७ प्रतीक्षा काफ्ले
स्याङ्जा — तमादीमा बिहीबार पहिरो जाँदा स्थानीय माया नेपालीसहित उनको घरका ९ जनाले ज्यान गुमाए । शुक्रबार फेरि खसेको पहिरोले २ घर विस्थापित भए ।
‘पहिरोका कारण एक दर्जन घर झुन्डिएका छन्,’ वालिङ–१४ तमादीका टीकाराम लुइँटेलले भने, ‘मेलापात र घरधन्दाले दिन त बितिहाल्छ , रातको समय बढी जोखिम छ । डरलाग्दो गरी पानी आउँछ ।’ धेरै परिवार छिमेकमा मिलेर राति सुत्ने गरेको उनले बताए ।
लुइँटेलका अनुसार बस्ती जोखिमको विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिँदै आइएको छ । तीनवटै सरकारले प्राविधिक पठाएर अध्ययन गर्ने र व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि पूरा भएको छैन । कमजोर भूबनोट भएको क्षेत्रको जमिन भिरालोमा छ । पानीको मूल धेरै ठाउँ पलाउँछन् । प्राविधिक अध्ययनबिनै खनिएका सडकका कारण जोखिम बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ । २०६७/६८ मा खनिएको वालिङ–भुर्मे–अर्चलडाँडा–डुम्रेभन्ज्याङ–हुवास ग्रामीण सडक दुई वर्षअघि मात्रै चौडा गरिएको थियो । सडकमा बारम्बार डोजर लगाउने काम भइरहेको स्थानीय कल्पना अर्याल बताउँछिन् ।
‘मेरो घर जोखिममा छ, जतिबेला जे पनि हुन सक्छ भनेर माया नेपालीले पनि बारम्बार भन्दै आएकी थिइन्,’ अर्यालले भनिन्, ‘सडक निर्माणको क्रममा तीन/चारपटक रोकिन् पनि । तर कतै सुनुवाइ भएन । आज उनको परिवारले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । यसको दोष कसलाई दिने ?’ जोखिम हुने जानाजान डोजर लगाउँदा अहिले समस्या उनले गुनासो गरिन् । यस क्षेत्रमा ३५ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् ।
‘ग्राभेल हाल्ने ठाउँमा ग्राभेल हाल्दैन, वाल चिन्ने ठाउँमा वाल चिन्दैन,’ लुइँटेलले भने, ‘माथि–माथि डोजर लगाउँछ यसै छाडिदिन्छ । आवश्यकभन्दा बढी सडक खनिएको छ । इन्जिनियरिङ पनि गरिएको छैन ।’
‘सडकको कटिङ धेरै छ । जति धेरै कटिङ गर्‍यो उति धेरै पैसा आउने रहेछ, काम देखिने रहेछ । ठेकेदार र इन्जिनियर यस विषयमा केही बोल्दैनन् । सडक डिभिजन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा पनि बजेटअनुसारको काम सकियो भनेर पन्छिने मात्र गर्छन्,’ स्थानीय भीमप्रसाद लुइँटेलले भने, ‘अब हामीले बाटो खन्न होइन सरसफाइ गर्नका लागि पनि डोजरसमेत लगाउन दिने छैनौं ।’ क्षति भएका ३ वटा घरको परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएर घडेरी खोज्न थालिएको छ । नगरपालिकाले सडक अर्कै सरकारले खनेको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
वालिङ नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले बस्ती जोखिममा छ भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको दाबी गरे । ‘सडक विभागले टेवा पर्खा बनायौं भने तर कहींकतै मात्र । वाल नभएपछि बर्सेनि पहिरोको आकार बढ्दै गयो । तत्कालै १२ वटा घर सार्नुपर्छ । अब पनि सचेत भइएन भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने । सडक विभागसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।
स्याङ्जाका एसपी होबिन्द्र बोगटीले तमादीको बस्ती पहिलेदेखि नै पहिरोको जोखिममा रहे पनि व्यवस्थापनतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको देखिएको बताए । बाहिरबाट एक दिन मात्र खटिने व्यक्तिले त जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीयले प्रतिदिन झेल्नु कष्टपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायले वैकल्पिक व्यवस्था गरे सुरक्षाकर्मी खटाएर भए पनि बस्ती स्थानान्तरण गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०९:५७